မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ မှော်ဘီမြို့ ဆပ်သွားတောကျေးရွာမှာ စားနပ်ရိက္ခာတွေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင် – Suehninsi
ခင်လှိုင်ကတော့ မေလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ မှော်ဘီမြို့၊ ဆပ်သွားတော ကျေးရွာမှာ စားနပ်ရိက္ခာတွေ လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီအလှူဟာ ဧပြီလ(၁၇) ရက်တုန်းက ကျရောက်ခဲ့တဲ့ မွေးနေ့ ကိုယ်စား ပြုလုပ်တဲ့ အလှူဖြစ်တယ်လို့ နေရဲက ပြောပါတယ်။ “အဖေ့ မွေးနေ့ အမှတ်တရလှူဖို့ရည်စူးထားတဲ့ ဆန်တွေကို မှော်ဘီ မြို့၊ ဆပ်သွားတော ကျေးရွာ မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခြံမှာ (၃၁)ရက်
တနင်္ဂနွေနေ့ ၁၀နာရီ လှူဒါန်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွာဦးကျောင်းက ဆရာတော် ကိုလည်း လှူဖွယ် ပစ္စည်းများ ကပ်လှူရင်းနဲ့ ရွာအနီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူများကို ၁.ဆန် ၊ ၂.ကြက်သွန်နီ၊ ၃.အာလူး၊ ၄.ပဲ ၊ ၅.အချိူမုန့် ၊ ၆. ခေါက်ဆွဲခြောက် ၊ ၇.Mask များ လှူတန်းပေးသွားမှာပါ။ ရွာလူကြီးများရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ တစီ တတန်း ၆ပေအကွာမှ တန်းစီ ပြီး စနစ်တကျ လှူတန်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဆိုပြီးတော့ မေလ ၃၀ ရက်နေ့ညက
ခင်လှိုင်ရဲ့သားဖြစ်သူ နေရဲ ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ခင်လှိုင်ဟာ Covid ကာလအတွင်းမှာ အလှူအတန်းတွေ မကြာခဏ လုပ်လေ့ရှိသူ တစ်ဦးပါ။ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲကြုံနေရတဲ့ အနုပညာလောကသားတွေ အတွက်ကိုလည်း စားနပ်ရိက္ခာအလှူတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ အလှူအတန်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင် တကယ်ကို
လက်မနှေးတဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ သရုပ်ဆောင်နေရဲ၊ သရုပ်ဆောင် သဇင်ထူးမြင့်တို့ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာသက်တမ်းလည်း နှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါး ရှိတဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်သလို လူရွှင်တော် တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင်ဟာ ရုပ်ရှင်ဘက်မှာ ဟာသသရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အဖြစ်
ရပ်တည်လာရင်း အခုဆိုရင် ကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာအဖြစ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေတောင်ရှိနေပါပြီ။ သူဟာ အလှူအတန်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင်လည်း လက်မနှေးသူတစ်ယောက်လို့ ပြောရမှာပါ။ အမြဲတမ်းလိုလို စတုဒီသာ အလှူတွေ ပြုလုပ်လျက် ရှိပြီး ပြီးခဲ့သောလပိုင်းလောက်က ရေရှားပါးသော နေရာများကို သူကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီး အလှူငွေများကောက်ခံကာ သွားရောက်လှူ ဒါန်းခဲ့တာ ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ခငျလှိုငျကတော့ မလေ ၃၁ ရကျနမှေ့ာ မှျောဘီမွို့၊ ဆပျသှားတော ကြေးရှာမှာ စားနပျရိက်ခာတှေ လှူဒါနျးခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။ ဒီအလှူဟာ ဧပွီလ(၁၇) ရကျတုနျးက ကရြောကျခဲ့တဲ့ မှေးနေ့ ကိုယျစား ပွုလုပျတဲ့ အလှူဖွဈတယျလို့ နရေဲက ပွောပါတယျ။ “အဖေ့ မှေးနေ့ အမှတျတရလှူဖို့ရညျစူးထားတဲ့ ဆနျတှကေို မှျောဘီ မွို့၊ ဆပျသှားတော ကြေးရှာ မှာရှိတဲ့ ကြှနျတျောတို့ ခွံမှာ (၃၁)ရကျ
တနင်ျဂနှနေေ့ ၁၀နာရီ လှူဒါနျးပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ရှာဦးကြောငျးက ဆရာတျော ကိုလညျး လှူဖှယျ ပစ်စညျးမြား ကပျလှူရငျးနဲ့ ရှာအနီး ပတျဝနျးကငျြမှာရှိတဲ့သူမြားကို ၁.ဆနျ ၊ ၂.ကွကျသှနျနီ၊ ၃.အာလူး၊ ၄.ပဲ ၊ ၅.အခြိူမုနျ့ ၊ ၆. ခေါကျဆှဲခွောကျ ၊ ၇.Mask မြား လှူတနျးပေးသှားမှာပါ။ ရှာလူကွီးမြားရဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြနဲ့ တစီ တတနျး ၆ပအေကှာမှ တနျးစီ ပွီး စနဈတကြ လှူတနျးပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ” ဆိုပွီးတော့ မလေ ၃၀ ရကျနညေ့က
ခငျလှိုငျရဲ့သားဖွဈသူ နရေဲ ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။ ခငျလှိုငျဟာ Covid ကာလအတှငျးမှာ အလှူအတနျးတှေ မကွာခဏ လုပျလရှေိ့သူ တဈဦးပါ။ စားဝတျနရေေး အခကျအခဲကွုံနရေတဲ့ အနုပညာလောကသားတှေ အတှကျကိုလညျး စားနပျရိက်ခာအလှူတှေ ပွုလုပျခဲ့တာ တှရေ့ပါတယျ။ အလှူအတနျးနဲ့ ပတျသကျလာရငျ တကယျကို
လကျမနှေးတဲ့ သရုပျဆောငျ တဈယောကျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။ သရုပျဆောငျနရေဲ၊ သရုပျဆောငျ သဇငျထူးမွငျ့တို့ရဲ့ ဖခငျဖွဈပါတယျ။ အနုပညာသကျတမျးလညျး နှဈပေါငျး ၃၀ နီးပါး ရှိတဲ့ ဇာတျပို့သရုပျဆောငျ တဈယောကျဖွဈသလို လူရှငျတျော တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျ ခငျလှိုငျဟာ ရုပျရှငျဘကျမှာ ဟာသသရုပျဆောငျ တဈယောကျအဖွဈ
ရပျတညျလာရငျး အခုဆိုရငျ ကိုယျတိုငျ ဒါရိုကျတာအဖွဈရိုကျကူးထားတဲ့ ရုပျရှငျကားကွီးတှတေောငျရှိနပေါပွီ။ သူဟာ အလှူအတနျးနဲ့ ပတျသကျလာရငျလညျး လကျမနှေးသူတဈယောကျလို့ ပွောရမှာပါ။ အမွဲတမျးလိုလို စတုဒီသာ အလှူတှေ ပွုလုပျလကျြ ရှိပွီး ပွီးခဲ့သောလပိုငျးလောကျက ရရှေားပါးသော နရောမြားကို သူကိုယျတိုငျဦးစီးပွီး အလှူငှမြေားကောကျခံကာ သှားရောကျလှူ ဒါနျးခဲ့တာ ကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။